Metal Mesh Pre-filter ရေချိုးနိုင်သောလူမီနီယမ်ကွက် Pre-filter ကိုကန ဦး စစ်ထုတ်စက် - China Metal Mesh Pre-filter ရေချိုးနိုင်သောလူမီနီယမ်ကွက် Pre-filter ကိုကန ဦး filter ကိုပေးသွင်း, စက်ရုံ - Shanghai Sffiltech Co. , Ltd ။
Pre Filters များ
မူလစာမျက်နှာ>ထုတ်ကုန်များ>စက်မှုဇုန်လေသန့်စက်>Pre Filters များ
သတ္တုကွက် Pre-filter ကိုရေချိုးနိုင်သောလူမီနီယမ်ကွက် Pre- filter ကိုကန ဦး filter ကို
M3 မှ Metal Mesh နှင့် Metal Frame， အတန်းအစား G6 နှင့်အတူ pleated Pre-Filter
လျှောက်လွှာ: လေအေးပေးစက်စနစ်အတွက်ကြိုတင် filter ကိုအဖြစ်
အမျိုးအစား - ကြိုတင်စစ်ထုတ်ရန်
မီဒီယာ: Polyester ဖိုင်ဘာ
ဘောင်: သွပ်ရှိသောသံမဏိ / လူမီနီယမ် / ABS
10 pleats / ပေ, ပုံမှန်ထုတ်ကုန်ထက် 25% ပိုမိုမြင့်မား
အရွယ်အစား (W * H)
လေစီးဆင်းမှု (m3 / h)
အမှိုက်ပုံ filter ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ရရှိနိုင် 1.Odd အရွယ်အစား
3.Frame: GZ သံမဏိ၊ သံမဏိ ABS ပလပ်စတစ်
8.Up ခြမ်း: gasket သို့မဟုတ်မ?
10.Down ခြမ်း: gasket သို့မဟုတ်မ?
Sffiltech သည်လူများအတွက်သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်သတ္တုကွက်နှင့်သတ္တုဘောင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Pre-filter ကိုအထူးပြုလုပ်သည်။ အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်မှုကိုသင့်အားအာမခံပေးနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဝယ်ယူရန်စိတ်ချပါ
ရေမှုန်ရေမွှားတဲများအတွက် G3 G4 ဖန်မျှင်ထည် Roll Floor Filter
ဒြပ် Fiber ကို G4 မူလတန်းထိရောက်အဖြူရောင်လျှော်မီလေထုစစ်ကြိုတင်ဝါဂွမ်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ
အဝတ်လျှော်နိုင်လွန်ကွက်ကြိုတင်လေကြောင်း filter ကို